Apple Watch Series 7 - Ezubere Dịka IPhone 12 | TeraNews.net
Apple Watch Series 7 - iPhone 12 sitere n'ike mmụọ nsọ
na-ede akwụkwọ Kravetz Pavel E bipụtara 08.12.2020
Mwepụta nke iPhone 12 ama gosipụtara na ụlọ ọrụ ahụ ka nwere ndị na-emepụta ihe. A sị ka e kwuwe, maka ogologo oge dị otú ahụ, ịhapụ otu ụdị ekwentị dị ezigbo ike gwụrụ. Ọbụna myirịta nke gadget na iPhone 4 emebighi na idyll. Ndị na-azụ ahịa kelere ngwaahịa ọhụrụ ahụ nke ọma, n'agbanyeghị ihe ha dere na ọnụ ụzọ akụkọ na netwọkụ mmekọrịta. Enwere ọchịchọ, ahịa bụkwa ihe na-egosi maka ndị rụpụtara ya.
Ma elekere agbanwebeghị atụmatụ ya kemgbe ụbọchị ngosipụta nke Apple Watch Series 4. Agba ọhụrụ, ihe - ee. Na imewe bụ otu. Ma, dị ka onye mmebe Wilson Nicklaus si kwuo, akụkọ na-adọrọ mmasị na-echere anyị. Apple Watch Series 7 - imewe na ụdị IPhone 12. Ihe niile na-adị oke mma na foto - ụdị nke nche ahụ siri ike karị. Kpọmkwem ọhụrụ smartphone.
Mgbe e dechara foto ndị ahụ na mgbasa ozi mgbasa ozi, Apple nwetara ọtụtụ okwu na-adịghị mma. Ihe dị ka 80% nke ndị ọrụ na-arọ nrọ nke Apple Watch nwere ngosi okirikiri. E nyere otu ihe atụ Huawei Watch GT2 Prona-enweghị nkịtị iOS akara na ndị ọzọ adaba arụmọrụ. N'agbanyeghị nke ahụ, onye ọrụ nke ọ bụla nke abụọ na-eme mkpesa banyere oke nri nke Apple Watch Series 2 n'ihe banyere inye ike. Otu ụbọchị na ọkara adịghị njọ.
Ndị na-enweghị kọntaktị ncha igwe - ihe dị mma maka ụlọ gị
Na egbe Huawei Huawei PlayStation na Microsoft Xbox
Neuralink - Elon Musk zuo oke
Xiaomi Mi Air Charge Technology - Igbe Pandora mepere
Okpokoro Okpokoro - gịnị bụ ya, gịnị bụ atụmanya
Kedu ụdị ejiji maka sneakers - mmiri-ọkọchị 2021
Bompa na Xiaomi Mi 10T Lite 5G - na ịchụ pragmatism
Etu esi eziga ya na Instagram - ngwa kacha
Nri na-eri ahụ riri ahụ
Samsung Smart Monitor: 3 na 1 - TV, PC na Nyochaa